AMBOSITRA - « SALON DE L’ETUDIANT » : Nahasarika tanora maro ny andiany voalohany
Ny fahazoana ny mari-pahaizana bakalorea dia tsy tanjona fa dingana araka ny voalaza ombieny ombieny eny anivon’ny fiarahamonina. 22 septembre 2017
Araka izany dia aorian’io dingana io no tena afaka misafidy izay ho aviny arak’asa rahatrizay ny tanora iray. Manambara izany fa tokony tsy hatao antsirambina ny fisafidianana ny lalam- piofanana arahana mba hahatratrarana izay tanjona arak’asa izay. Ny « Salon de l’étudiant » dia anisany hetsika iray manampy ireo tanora amin’ny fisafidianana izay lalam- piofanana izay.
Raha saika teto an-drenivohitra foana no nisian’izany hatrizay dia nanatanteraka izany ihany koa ny tao amin’ny renivohitry ny faritra Amoron’i Mania, tao amin’ny Distrikan’Ambositra ny 14, 15 ary ny 16 Septambra lasa teo. Tsara tsipihana etoana fa vao miditra amin’ny andiany voalohany izany hetsika « Salon de l’étudiant » izany raha tany amin’iny faritra iny. Anisany tena zava-dehibe tamin’izany hetsika izany ny fifampizaràana teo amin’ireo mpandray anjara samihafa mahakasika ny maha zava-dehibe ny sampam- piofanana ambony isankarazany izay maro azo isafidianana tokoa ho an’ireo mpianatra izay vao nahazo ny mari-pahaizana bakalorea farany teo, tany amin’iny faritra iny.
Nandray anjara avokoa ireo mpisehatra samihafa
Amin’izao ankatoky ny fialan-tsasatra izao dia maro ireo tanora afaka fanadinana bakalorea no nahazo tombony tamin’izao « Salon » izao, izay vao sambany nisy tao amin’ ny renivohitry ny faritra Amoron’i Mania. Saika tonga tamin’izany hetsika izany avokoa ny solontenan’ny oniversite rehetra misy avy amin’ny faritra Analamanga, Vakinankaratra ary Amoron’i Mania, na miankina amin’ny fanjakana izany na tsia. Ankoatr’ireo dia anisany tonga tamin’izao hetsika izao ihany koa ny avy ao amin’ny faritra Matsiatra Ambony.
Araka ny nambaran’ny mpikarakara dia nisy ihany koa fandraisana anjaran’ireo mpisehatra izay tsy mifandraika mivantana amin’ny tontolon’ny oniversite kanefa ilain’ny tanora. Tafiditra tao anatin’izany ny mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny zavakanto, eo emin’ny sehatry ny asa-tanana malagasy, eo amin’ny lafiny zavamaniry. Teo ihany koa ireo mpisehatra mifototra amin’ny asa mampiavaka ny faritra Amoron’i Mania manokana.
Ny fiarahana niasa tamin’ireo mpisehatra samihafa ireo no nitsirihan’ny hevitra hoe hatao « Foara » ny hetsika. Mbola eo am-pandinihana izay soson-kevitra izay ny mpikarakara ny hetsika ankehitriny saingy nanome toky kosa fa hohatsaraina bebe kokoa ny hetsika amin’ny andiany manaraka fa santatra ihany izay vita izay.
Tsy nanameloka an’i Mamy Ravatomanga ny Fitsarana Frantsay FANOSORAM-POTAKA NATAON’NY HVM (244) 18 juillet 2019 Mbola anjakan’ny fitiavan-tena sy ny tombontsoa manokana FILOHA TEO ALOHA RAVALOMANANA MARC (170) 16 juillet 2019 Notolorana mari-boninahitra, nahazo tambin-karama mitenina 250 000 dolara EKIPAM-PIRENENA BAREA (97) 16 juillet 2019 Depiote tsy miankina 21 nanangana vondrona parlemantera iray ANTENIMIERAM-PIRENENA (87) 22 juillet 2019 Notanana am-ponja vonjimaika any Tsiafahy LEHILAHY IRAY NITORAKA POLISY (73) 19 juillet 2019 Nampiray ny Malagasy tsy vaky volo ny Barea KARDINALY TSARAHAZANA DESIRE (68) 16 juillet 2019